नेपाल आज | कोरोनाकाे कमाल : विद्यार्थीको मिसकलमा शिक्षकको कलब्याक !
कोरोनाकाे कमाल : विद्यार्थीको मिसकलमा शिक्षकको कलब्याक !
बर्दिया । कोरोनाको कहरले यतिबेला देश लक्डाउन अवस्थामा छ । कोरोना त्रासका कारण स्कुल कलेजहरु सबै बन्द छन । सरकारले एसईईदेखि कक्षा ११ र १२ को परिक्षासमेत स्थगित गरेको छ । यस्तो बेलामा लकडाउन खुलेपछि हुने परिक्षाका लागि देशभरका बिद्यार्थीहरु 'सेल्फ स्टडी' गरिरहेका छन् ।
नेटको पँहुचमा हुने बिद्यार्थीहरु अनलाइन स्टडी समेत गरिरहेका छन् । तर बर्दियाको एक बिद्यालयले भने कोरोना कहरकाबीच बिद्यार्थीहरुलाई पढाउन नयाँ जुक्ति निकालेको छ । जुक्ति हो- विद्यार्थीले घरमै पढ्ने, केही नबुझेको बिषयबारे सोध्न शिक्षकलाई मिसकल गर्ने र शिक्षकले कलब्याक गर्ने ।
कक्षा १०, ११ र १२ का विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी बर्दियाको श्री धर्मभक्त माविले विद्यालयले उक्त निर्णय लिएको हो । विद्यालयले स्क सूचना नै प्रकाशित गरेर उक्त जानकारी दिएको छ ।
लकडाउनको सदुपयोग गर्दै बर्दियाका विद्यालयहरुले पठनपाठनमा नयाँ शैलीको प्रयोग गरेका हुन् । एसअघि बर्दियाकै ठाकुरबाबा क्षेत्रका विद्यालयहरुले स्थानीय संचारमाध्यमको प्रयोग गरि एसईईको तयारी गराइरहेको त्यहाकी स्थानीय बिनु भट्टराईले जानकारी दिइन ।
हातको हातको कोरोना धोए जाला, माथको कोरोना भगाउन नयाँ हिसाबले पढाइ थालौं